‘चन्डीराज ढकाल महासंघको पर्यायवाची हो, उहाँ नभए जिल्ला नगरको कुरा नै सुनिदैंन’ « Bizkhabar Online
14 July, 2020 12:55 pm
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ उद्योगी व्यवसायीहरुको प्रतिनिधिमुलक संस्था भएपनि महासंघ नेतृत्वले व्यवसायीक हकहितमा काम गर्न नसकेको भन्दै विरोधका आवाज सुनिन थालेका छन् । विशेषगरी जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुले महासंघ नेतृत्वले आफ्ना समस्याहरु समाधान गर्न चासो नदेखाएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । अहिले महासंघ कमजोर बन्दै गएको महशुस भएको जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ गैडाकोट, नवलपरासीका अध्यक्ष तथा महासंघको आगामी निर्वाचनमा जिल्ला नगरतर्फका सदस्य पदका उम्मेदवार अमृत भट्टचन बताउँछन् । महासंघको विरासतलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउनका लागि पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्रप्रसाद ढकाल र जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा गुणनिधी तिवारीलाई समर्थन गर्दै सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिन लागेको उनको भनाई छ । महासंघको आसन्न निर्वाचनमा केन्द्रित रहेर उनै भट्टचनसँग बिजखबरले गरेको कुराकानीको सार :
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न निर्वाचनमा जिल्ला नगरतर्फबाट सदस्य पदमा उठ्दै हुनुहुन्छ । तपाईंको उम्मेदवारी किन ?
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ एउटा इतिहास बोकेको संस्था हो । अहिले त्यस्तो संस्था माथि सरकार वा समग्र क्षेत्रले हेर्ने नजर धुमिलिएको छ । अहिले उद्योग व्यवसायीका अनेकौं गुनासा छन्, तर नेतृत्वले काम गर्न सकेको छैन । कोरोनाको बेलामा पर्यटन व्यवसायदेखि अन्य उद्योग व्यवसाय धराशायी भएको छ । यस्तो अवस्थामा महासंघको नेतृत्व मौनजस्तै छ । यो अवस्थमा महासंघको नेतृत्व असफल भएको छ भनेर भनिरहन नपर्ला । आगामी दिनमा नेतृत्वलाई सबल र सक्षम बनाएर जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न पनि हामीले पहल गरिरहेका छौं । उच्च बैंक ब्याजदर तथा कोरोना महामारीका कारण जिल्ला नगरका धेरैजसो उद्योगी व्यवसायी धराशायी भैसकेका छन् । यो अवस्थामा सरकारले पनि उद्योगी व्यवसायीका समस्या बुझ्न सकेको छैन । अबका दिनमा आउने नेतृत्वले आम व्यवसायीका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ र त्यसैका लागि म महासंघमा प्रवेश गर्दैछु ।
व्यवसायीक हकहितका लागि तपाईंका खास एजेण्डा के हुन् ?
अहिले महासंघ नेतृत्वले गर्नुपर्ने धेरै कामहरु गर्न सकिरहेको छैन । भवानी राणा नेतृत्वको महासंघले व्यवसायीक हकहितका लागि अहिलेको कार्यकालमा गरेका ५ ओटा काम मात्र बताईदिनु भयो भने म उहाँहरुको सधै प्रसंशक हुनेछु । तर उहाँहरुले कुनै पनि काम गर्न नसकिरहेको अवस्था र महासंघको धुमलिएको छविलाई पुनः पुर्नजागृत गर्दै पुरानै विरासतमा ल्याउनका लागि मैले महासंघका जिल्ला नगरकोतर्फबाट सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएको हुँ । अहिले जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघका उद्योगी व्यवसायीहरु कोरोनाका कारण पलायन हुने अवस्था पुगेका छन् भने कर लगायतका समस्या पनि उत्तिकै छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्न पनि महासंघको आसन्न निर्वाचनमा जिल्ला नगरका तर्फबाट चुनावी मैदानमा उत्रिएको हुँ ।
महासंघको सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिइरहँदा बरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्रप्रसाद ढकाल र जिल्ला नगरतर्फको उपाध्यक्षमा गुणनिधी तिवारीको प्यानलबाट आउनु भएको छ । किन त्यहिँ प्यानलबाट उम्मेदवारी दिनुभयो ?
महासंघको आसन्न निर्वाचनमा बरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्रप्रसाद ढकाल दाई र जिल्ला नगरमा गुणनिधी तिवारीले उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ । मलाई विश्वास छ कि यो नेतृत्वले महासंघको धमिलिएको छविलाई पुनर्जागृत गर्दै पूनः मजवुद बनाउने छ । नेपालको उद्योग व्यवसायमा चन्द्रप्रसाद ढकाल दाई शुन्य तहबाट आउनु भएको हो । तर अहिले नेपालका ७७ वटै जिल्लामा उहाँका व्यवसायहरु फैलिएका छन् भने अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा पनि त्यतिकै दरिलो सम्बन्ध छ । उहाँ एक सफल व्यवसायी हुनुहुन्छ भने साना, मझौला र ठूला सबै खाले व्यवसायीका समस्या राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ । महासंघको नेतृत्वमा आउने व्यक्तिले व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न सरकारसँग पनि त्यतिकै लविङ गर्नु जरुरी छ । जुन क्षमता चन्द्र ढकालसँग छ ।
‘भवानी राणा नेतृत्वको महासंघले व्यवसायीक हकहितका लागि अहिलेको कार्यकालमा गरेका ५ ओटा काम मात्र बताईदिनु भयो भने म उहाँहरुको सधै प्रसंशक हुनेछु । तर उहाँहरुले कुनै पनि काम गर्न नसकिरहेको अवस्था र महासंघको धुमलिएको छविलाई पुनः पुर्नजागृत गर्दै पुरानै विरासतमा ल्याउनका लागि मैले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्रप्रसाद ढकाल र जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा गुणनिधी तिवारीलाई समर्थन गर्दै सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएको हुँ । ‘
अहिले केही साथीहरु सरकारसँग द्वन्द्व वा विरोध गरेर अघि बढ्नु पर्छ भन्ने मानसिकता लिएर हिड्नु भएको छ । तर त्यसरी मात्र पनि हाम्रा समस्या समाधान हुँदैनन् । सरकारसँग सहकार्य गर्दै उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न सक्नुपर्छ । तसर्थ चन्द्र ढकालले समग्र व्यवसायीका समस्यालाई सरकार माझ राखेर सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो आशा र भरोसा छ । उहाँले छोटो समयमै जिल्ला नगरदेखि बस्तुगत र एशोसिएट्स साथीहरुको मन जित्न सफल हुनु भएको छ । यसैगरी जिल्ला नगरतर्फका उपाध्यक्षका उम्मेद्वार गुणनिधी तिवारीसँग पनि महासंघमा लामो समयदेखि बसेर काम गरेको अनुभव छ । उहाँ पनि शुन्य तहबाटै उद्योग व्यवसायमा प्रवेश गर्नु भएको हो । अहिले सफल हुनु भएको छ । उहाँलाई हरेक उद्योगी व्यवसायीको समस्या थाहा छ, अनुभव पनि छ । जिल्ला नगरकै तर्फबाट महासंघमा डेढ दशकदेखि प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ । तसर्थ उहाँहरुको नेतृत्वमा महासंघ सञ्चालन गर्न सकियो भने अहिले देखिएका उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
महासंघको निर्वाचनमा जिल्ला नगरको ५० प्रतिशत मतभार रहन्छ । तर, महासंघ नेतृत्वले सधै जिल्ला नगरलाई नै उपेक्षा गर्यो भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ । अवस्था त्यस्तै हो ?
पक्कै पनि महासंघको निर्वाचनमा जिल्ला नगरतर्फको मतभार ५० प्रतिशत रहन्छ भने कार्यसमितिमा सोही अनुरुपको उपस्थिती रहन्छ । तर पछिल्लो समय महासंघमा जतिपनि नेतृत्वहरु आउनु भएको छ एशोसिएट्बाटै छन् । उहाँहरुको न केन्द्रभन्दा बाहिर व्यापार व्यवसाय छ न जिल्लाका उद्योगी व्यवसायीका समस्यासँग भिज्नु भएको छ ।चण्डीप्रसाद ढकाल पछि अहिलेसम्मका नेतृत्व एशोएिसट्बाटै छन् । उहाँहरु जिल्ला नगरको भोटबाट अध्यक्ष बन्दै आउनुभएको छ तर अध्यक्ष बनेपछि त्यहिं क्षेत्रका समस्या नहेर्ने परिपाटी बनेको छ । जिल्ला नगरलाई भोट बैंकको रुपमा मात्र प्रयोग गर्दै आउनु भएको छ । जिल्ला नगरमा दैनिक कामदेखि कर लगायतका धेरै समस्या हुन्छन् । उदारहणका लागि अहिलेको कोरोना महामहारीमा जिल्ला नगरमा धेरै खालका समस्या उत्पन्न भएका छन् । तर उहाँहरु निर्वाचित भएर गएपछि जिल्ला नगरका उद्योगी व्यवसायीहरुको फोन नउठाउने, समस्या परेमा कुनै वास्ता नगर्ने परिपाटीको विकास भएको छ । अहिले जिल्ला नगरका साथीहरुको मुख्य गुनासो नै हाम्रो भोटले अध्यक्ष बनेर आफ्नो स्वार्थ अनुरुप लाभ लिने तर आफुहरुका कुनै पनि गुनासोको सुनुवाई गरेनन् भनिरहेका छन् । जिल्ला नगरका व्यवसायीक मुद्दाहरुलाई उहाँहरुले फर्केर पनि हेर्नु भएको छैन।
उदाहरणका लागि शेखर गोल्छा महासंघको आसन्न साधारणसभा पछि स्वत अध्यक्ष हुँदैहुनुहुन्छ । तर अहिले नै उहाँको कार्यशैलीप्रति व्यापक आलोचना भैसकेको छ । उहाँ बरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदा जिल्ला नगरका साथीहरुसँग जुन वचन बद्धता गर्नुभएको थियो तर अहिले कुनै पनि सम्बोधन भएको छैन । जिल्ला नगरका मुद्दामा कहिंकतै पनि बोल्नु भएको छैन । वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चुनाव जितेर आएपछि जिल्ला नगरका उद्योगी व्यवसायीका समस्याका बारेमा एक शब्द पनि नबोलेका गोल्छा अहिले आफ्नो प्यानल जिताउनका लागि भोट माग्दै हुनुन्छ रे । तीन बर्षसम्म व्यवसायीक मुद्दामा कुनै आवाज नउठाउने गोल्छाले अहिले केका आधारमा आफ्नो गुटका लागि भोट माग्दै हुनुहून्छ । उहाँलाई अहिलेको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायी माझ आउन लाज लाग्नु पर्ने होइन ? अर्को कुरा हाल महासंघको नेतृत्व गर्दै आउनु भएको भवानी राणा । उहाँले व्यवसायीक हकहितका लागि गरेका ५ वटा मात्र बताईदिए पुग्छ । उहाँको तीन बर्षे कार्यकालमा के काम गर्नुभयो, के उहाँले हामी सदस्य माझ बताउनु सक्नुहुन्छ ? तर उहाँले कुनै पनि काम गर्न सक्नुभएन । उहाँ के स्वार्थमा अल्झिनु भयो त्यो हामीलाई थाहा भएन । तर कुनै पनि व्यवसायीक मुद्दामा काम गर्न सक्नु भएन । यो हामी जिल्ला नगरका साथीहरुको विडम्वना हो ।
व्यवसायीक हकहितका लागि एक जुट हुनुपर्ने अवस्थामा तपाईहरु किन सर्वसम्मत नेतृत्व चयनमा जान सक्नु भएन ? किन दुई प्यानल बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रनु भएको ? आखिर व्यवसायीक मुद्दा त एउटै होइन ?
हुनु पर्ने त्यहि नै हो । सुरुमा सर्वसम्मतीका लागि नै पहल गरेका हौं । तर एकथरी साथीहरुको मुख्य लक्ष्य भनेको महासंघको अभिभावक चण्डीराज ढकालको कसरी विरोध गर्ने, उहाँलाई कसरी कमजोर बनाउने भन्ने लविङमा लाग्नु भयो । महासंघको अविभावकको विरोध गर्ने विषयमा हामी सहमत हुन सकेनौै भने त्यो उहाँहरुको दिवास्प्ना मात्र थियो । अहिले पनि चण्डीराज ढकाल भनेको महासंघको पर्यायवाची नै हुनुहुन्छ । यदि महासंघमा चण्डी ढकाल सक्रिय भुमिकामा नरहने हो भने जिल्ला नगरका उद्योगी व्यवसायीको समस्याको सनुवाई नै हुँदैन । कुनै पनि समय व्यवसायीलाई समस्या परेका तुरुन्त एक्सनमा उत्रिनुहुन्छ । अहिले महासंघका नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरुले आफु अनुकुलका संचार माध्यममार्फत चण्डी ढकाल विरुद्ध प्रहार गर्दै आउनु भएको छ । होला उहाँहरुमा पनि चण्डी ढकाल बन्ने सपना । तर चण्डी ढकाल बन्नका लागि सोही अनुरुप योगदान पनि गर्नु पर्यो नि । जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघका साथीहरुलाई सहयोग गर्नु पर्यो । व्यवसायीले समस्या परेर फोन गर्दा तुरुन्त उठाएर समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।
‘अहिले भवानी राणा र शेखर गोल्छाले व्यवसायीक हितभन्दा पनि महासंघ भित्र गुटगत राजनीति गरेर त्यसैको जोडवलमा आफू अनुकुल लाभ लिइरहेका छन् । आफू अनुकुलका व्यक्ति जिताउन तीन बर्षपछि जिल्ला नगरका साथीहरुलाई फोन गर्दैछन् । के उहाँमा जिल्ला नगरका साथीहरुलाई फोन गर्ने नैतिकता छ ?’
हुन त म चण्डी ढकालको कार्यकालमा कुनै पनि पदमा थिइन । तर उहाँले आफ्नो कार्यकालमा महासंघको पक्षमा गरेको कामको बारेमा सुन्दा अहिले पनि गौरव लाग्छ । तसर्थ हामीहरु जिल्ला नगरका साथीहरु चण्डी ढकाल, चन्द्र ढकाल र गुणनिधी तिवारीलाई समर्थन गर्दै पछि लागेका हौं । चण्डी ढकाल पछिका नेतृत्वले महासंघमा गर्न नसकेका काम उहाँहरु नेतृत्वमा पुगेपछि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास पनि छ । अहिले भवानी राणा र शेखर गोल्छाले व्यवसायीक हितभन्दा पनि महासंघ भित्र गुटगत राजनीति गरेर त्यसैको जोडवलमा आफू अनुकुल लाभ लिइरहेका छन् । आफू अनुकुलका व्यक्ति जिताउन तीन बर्षपछि जिल्ला नगरका साथीहरुलाई फोन गर्दैछन् । के उहाँमा जिल्ला नगरका साथीहरुलाई फोन गर्ने नैतिकता छ ? शेखर गोल्छा महासंघको आसन्न साधारणसभा पछि हामीले अध्यक्ष मानेको व्यक्ति हो । यस्तो अवस्थामा उनी सर्वमान्य भएर बस्नुपर्ने होइन । महासंघको अविभावकत्व लिने व्यक्तिले कसैको पक्ष विपक्षमा बोल्न मिल्छ । यदि भोलीका दिनमा उनले समर्थन गरेको टीमले जितेर आएन र उनी अल्पमतमा परे भने नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिएर हिड्ने कि हिनताबोध गर्दै महासंघमै टासिएर बस्ने ? के यो प्रश्नको उत्तर गोल्छासँग छ ? तसर्थ यदि शेखर गोल्छाले अब महासंघको अध्यक्ष सम्हाल्ने हो भने आफ्नो धरातल सम्झिाएर मौन भएर बस्नुपर्छ ।
कोरोनापछि व्यवसायीहरु एकदमै समस्यामा छन् भने धेरैजसो व्यवसायीहरु पलायन हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । यसलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ ?
हामी जिल्ला नगरका अध्यक्ष हौं । अहिले जिल्ला नगरका उद्योगी व्यवसायीहरु धेरै ठूलो मारमा पर्नुभएको छ । अहिले सबै उद्योग व्यवसाय बन्द छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारबाट कुनै पनि सहयोग पाएका छैनौं । सरकारले कोरोनाका कारण केही समय बैंकको किस्ता र व्याज तिर्न पर्दैन भनेर सहुलियत दिएको छ । तर, बैंकले निरन्तर फोन गरेर उद्योगी व्यवसायीलाई दबाब दिँदै आएको छ । समयमै व्याज तिर्दा समेत छुट पाउन सकेका छैनौं । यस विषयमा हामीले भन्ने भनेको नेतृत्वलाई हो । तर नेतृत्वले यस विषयमा कुनै काम गर्न सक्नु भएको छैन । अहिले महासंघको नेतृत्व व्यवसायीक हकहितमा भन्दा पनि हाम्रो मतले नेता बनेर सरकारसँग आफ्नो निजी स्वार्थका लागि छलफल गर्दै सोही अनुरुप लाभ लिइरहेका छन् । यस्तो भयावह अवस्थामा पनि व्यवसायीक मुद्दामा बोल्न सक्नु भएको छैन । यो अवस्था सम्म आईपुग्दा भवानी राणाको नेतृत्व पूर्ण रुपमा असफल भएको छ । यो कुरा तपाईहरुकै अनलाईन मार्फत उहाँ समक्ष पुर्याउन पनि चाहन्छु ।
महासंघको आसन्न निर्वाचनमा जिल्ला नगरतर्फबाट सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ । मतदातालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
महासंघ एउटा इतिहास बोकेको संस्था हो । तर अहिले महासंघको छवि र सरकारले महासंघलाई हेर्ने नजर एकदमै नाजुक अवस्थामा छ । महासंघभन्दा धेरै पछि खुलेका संस्थाहरुले व्यवसायीक मुद्दामा लिड गरिसके तर महासंघ झन्झन् पछि पर्दैछ । हामीसँग जिल्ला नगरमा दशौं वर्ष बसेर काम गरेको धेरै अनुभव छन् । जिल्ला नगरका व्यवसायीहरुको समस्यासँग जुध्दै यो अवस्थासम्म आईपुगेका छौं । व्यवसायीक हकहितमा लड्नुपर्छ भने सोही अनुरुप व्यवसायीक मुद्दालाई स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने आशा र विश्वास छ । जिल्ला नगरका व्यवसायीका हक अधिकारका लागि लड्न महासंघको केन्द्रिय सदस्यमा उम्मेदवारी दिँदै छु । महासंघको धुमलिएको छविलाई पुरानै विरासतमा फर्काउँदै व्यवसायीक हकहितमा काम गर्न महासंघको केन्द्रिय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको हुँ । यसका लागि सहयोग गर्न सबैसँग अपिल गर्दछु ।